Ucoceka njani ijezi ezinithiweyo
1. Umvelisi wejezi ukholelwa ukuba iimpahla ezinithiweyo kufuneka zisuswe uthuli kwaye zifakwe emanzini abandayo kangange-10-20 yemizuzu ngaphambi kokuhlamba. Emva kokuwakhupha, khama amanzi, uwafake kwisisombululo somgubo wokuhlamba okanye isepha yesisombululo kwaye uthambe ngobunono, emva koko ...
Amanyathelo okhuseleko ekucoceni iijezi ezinithiweyo
1. Abavelisi bejezi bayazi ukuba iijezi ezinithiweyo kulula ukuba zikhubazeke, ngenxa yoko awunakutsala ngamandla ukuthintela ukumila kweempahla kwaye uchaphazele ukunxiba kwakho. 2. Emva kokuhlamba ijezi enithiweyo kufuneka yomiswe emthunzini, ixhomeke kwindawo engena umoya kwaye yomile ...
Abavelisi bejezi bayazi ukuba umahluko ocacileyo phakathi kokulukwa nokunitha yile: ephothiweyo yenziwa ngokudibanisa i-warp kunye ne-weft, ke kukho iindlela ezimbini ze-warp kunye ne-weft. Kodwa ukunitha kwenziwa ngeluphu eqhubeka ngokuqhubekekayo, ke inezinga elithile ...
Iimpahla eziqhelekileyo ezinithiweyo
1. I-acetate fiber (i-Acetel) yelaphu elinithiweyo Ijezi abavelisi be-acetate ifayibha ineempawu ezizodwa ezifana nesilika, ukukhanya kwefayibha kunye nombala oqaqambileyo, ukugqwesa okugqwesileyo kunye nokuziva. Ilaphu elinithiweyo eliveliswe yiyo linemvakalelo egudileyo yesandla, ukunxiba kakuhle, ukufuma kunye ...
Iindlela ezintlanu zokukhetha iimpahla ezinithiweyo zabantwana
UWang: Abavelisi bejezi bakholelwa ukuba awunakujonga nje kwixabiso xa uthenga iimpahla, kodwa umgangatho ngoyena ndoqo. Ivumba: Kuphephe ukuthenga iimpahla ezinamavumba amabi; kuthintele ukuthenga iimpahla ezinyangiweyo nge-anti-mibimbi kunye ne-bleached yabantwana. Umbuzo: ...
Zithini iinkqubo zokuhombisa umatshini wokulungisa ijezi
Umzi mveliso we Knitwear kukucwangcisa iimveliso ezigqityiweyo kunye nezinto ezingasetyenziswanga kwisinxibo. Ngokuyintloko kubhekiswa kulongezo lweefrills, iinwele, amaqhosha, iipompo, imitya kunye nezinye izinto ezinxibayo, okanye ukubamba imisonto, iintyatyambo, ukubongoza kunye nokubongoza. Sebenzisa i-sp ...
Ingqwalaselo kufuneka ihlawulwe kwinkqubo yemveliso yeempahla ezinithiweyo
1. Umthengisi wejezi ukholelwa ukuba kubaluleke kakhulu ukuvavanya ukuncipha kwelaphu ngaphambi kokusika kwaye uhlengahlengise iphethini ngokokuncipha. 2. Inkqubo ephambili yezambatho ezinithiweyo kukugqobhoza ngaphezulu, okuxhomekeke kubuninzi, ububanzi, umbala kunye ne-quali ...
Ezinye izakhono zokudibanisa umbala wezacholo ezinithiweyo
1. Bomvu ngombala omhlophe, omnyama, luhlaza okwesibhakabhaka-ngwevu, ngwevu nangwevu. 2. Ipinki emfusa, ngwevu, luhlaza mnyama, mhlophe, beige, mdaka, luhlaza okwesibhakabhaka. 3. Umbala o-orenji ubomvu mhlophe, mnyama namnyama. 4. Mthubi ezimfusa, luhlaza, mhlophe, mdaka, mnyama. 5. Ibrown nge-beige, irusi etyheli, bomvu ngezitena, luhlaza-gree ...
Imvelaphi kunye nophuhliso lweempahla zamadoda ezinithiweyo
Impahla ivele kumanqanaba okuqala ophuhliso loluntu. Abantu bamandulo babesenza "iimpahla" ezingafunekiyo ngezinto ezahlukeneyo abanokuzifumana ukuze bazikhusele. Izambatho zokuqala zomntu zazenziwe ngezikhumba zezilwanyana, kunye "nelaphu" lokuqala ...